swisscontact နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့(LRC)တို့မှ COVID-19 ကာလအတွင်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေသော ရွေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ ၆၀၀ဦးအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားများ အပြင် အခြားထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးလှူဒါန်းခြင်း | Local Resources Centre
swisscontact နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့(LRC)တို့မှ COVID-19 ကာလအတွင်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေသော ရွေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ ၆၀၀ဦးအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားများ အပြင် အခြားထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးလှူဒါန်းခြင်း
lrc_admin Friday, July 10th, 2020
Swiss Agency for Development and Cooperation SDC ၏ ရံပုံငွေပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော swisscontact နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့(LRC)တို့မှ COVID-19 ကာလအတွင်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေသော ရွေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ ၆၀၀ဦးအတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားများ အပြင် အခြားထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးလှူဒါန်းခြင်းနှင့် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်မှုအခြေအနေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို ဇူလိုင်လ(၇)ရက်နေ့တွင် ဘုရားသုံးဆူ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် လူငယ်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများအရ “ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အလုပ်အကိုင်မရှိကြောင်း၊ စားဝတ်နေရေးအရမ်းအခက်အခဲရှိကြောင်း၊ အရင်ကတည်းက နေ့စား ဝင်ငွေနည်းပါးသဖြင့် ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်သွားတော့ပိုဆိုးသွားကြောင်း၊ သူက ပန်းရံဝါသနာပါသူဖြစ်ကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ချင်သူဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအလုပ်ကို လုပ်ရန် အတွက် ဆောက်လုပ်ရေးပညာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ လိုအပ်ကြောင်း”ကို ဦး- (အိမ်ထောင်ဦးစီး)(နေ့စားအလုပ်သမား)မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Please see the English Language below;
With the financial support of Swiss Agency for Development and Cooperation SDC, swisscontact and Local Resource Centre(LRC) implement the project with youth volunteers to provide basic needs supplies like rice, salt, and cooking oil and also collect data from 600 migrant workers. According to the data collection, one of the odd-job workers said “During this Covid-19 pandemic, there are not many chances to get work already but now it becomes harder. I am interested in mason work but if I want to do that work, I need to learn about mason knowledge and also have to buy equipment.”
“PEACE” စီမံကိန်း၏ ဂုဏ်ပ ...
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများရှိ ရွာသူ/သားမျ ...
Helvetas Myanmar၊ ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာအ ...
နိုင်ငံတော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး နိုင် ...
နိုင်ငံတော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် န ...
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံသ ...